Sedexaan Arin Hakala Hadlin Ninka Aad Sheeko Wadaagga Tihiin - Arimaha Bulshada
Shabakada arimaha Qoyska ee Arimahabulshada.com ayaa gabaryaheey kuula talineysa in aad ka fogaato in sedexdaan arin aad kala hadasho saaxibkaada ee xariirka jaceylka aad wada sameyneysaan .
In Aad Uga Hadasho Noloshaada gaarka ah : si waliba oo ay aheyd daruufahaadii hore sida in nin uu ku soo dalbaday ama in ay jiraan rag badan oo kaa helay kuwaasi oo goobta shaqda ama iskuulka isla joogtaan hadaba waligaa ha kala hadlin ninka aad mustaqbalka aad wadaageysaan arimahaas .
Ogaaw ragga ma jecla in looga sheekeeyo xariiradii hore ee la soo maray hadaba il gaar ah u yeelo arintaan .
Ha Qod-qodin Noloshiisa Gaarka Ah: Su`aashana waxaa laga yaabaa in gabdho badan ay ka helaan si dhab ahaan u ogaadaan nolosha saaxibkooda iyaga oo ka eegaya xariiradii hore ee uu soo maray iyo in haatan ay jirto gabar uu ka helay amaba xariir uu la leeyahay , hadaba maxaa ku dhibay gabaryaheey oo qod-qoditaankaas kuu geystay waxaaba suura gal ah in ay dhib kuu keento .
Ogaaw in aad wax ka oghaato xariiradii hore ee saaxibkaadii ama xaas uu horay u soo furay waxa ay wasaqeyneysaa hawada noloshiina ee haku mashquulin.
Ha Is Dhaleceyn Naftaada: Ragga aad ayay u neceb yihiin haweenka ka ganuunaca muuqaalkooda ama qaabka dhimaha jirkooda ama timahooda iyaga oo is leh qanci ninkaada , ee waxaad ogataa in ay ka helaan haweenka naftooda ku kalsoon